Yintoni iDrupal? | IMarTech Blog
NgoLwesihlanu, ngoJuni 2, 2017 NgoMgqibelo, ngoJuni 10, 2017 UJohn Blue
Ngaba ujonge Drupal? Ngaba ukhe weva ngeDrupal kodwa awuqinisekanga ngento onokuyenza yona? Ngaba i-Drupal icon ipholile nje ukuba ufuna ukuba yinxalenye yale ntshukumo?
I-Drupal liqonga lolawulo lomxholo ovulekileyo elinika amandla iiwebhusayithi kunye nokusetyenziswa. Yakhelwe, isetyenzisiwe, kwaye ixhaswa luluntu olusebenzayo nolwahlukeneyo lwabantu kwihlabathi liphela.
Ndicebisa ezi zixhobo ukuba uqalise ukufunda ngakumbi ngeDrupal:
Isikhokelo sokuGqibela kuDrupal ™ -Inyathelo ngeNyathelo-ngeVidiyo yoQeqesho loQeqesho olubonisa ukuba iimfihlo ezimfutshane zendlela yokunqongophala… Kwiiyure ezingaphantsi kwesithandathu, nangaphandle kwentloko!
yokuzonwabisa: UDries Buytaert, umyili weDrupal, uqokelele iimpendulo ezahlukeneyo ukunceda ukuphendula loo mbuzo mdala "Yintoni iDrupal". Le vidiyo imfutshane ibonelela ngombono kunye nokuqonda malunga nendlela ababhekisi phambili ngayo, abaqulunqi, abahleli, kunye nabayili bomxholo abasondela eDrupal. Le vidiyo imfutshane ivela kwiDries Buytaert's Ngundoqo eDrupalCon Chicago, ngoMatshi 7, 2011.
incwadi: Sebenzisa iDrupal inikeza imizekelo yokuphunyezwa kweemeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwewebhu, ukusuka ekudaleni indawo yokuphonononga imveliso ukuseta ivenkile ekwi-intanethi. Imizekelo isebenzisa uninzi lwee iimodyuli ezinegalelo Uluntu lwaseDrupal luye lwadala.
Uthotho lweProdcast yePodcast
The Amazwi eDrupal uthotho lwePodcast lubonelela ngefomathi emfutshane kwinto eyenzekayo eluntwini, zeziphi iitekhnoloji ezisetyenziswayo, kunye nendlela ezikhula ngayo iimodyuli
The I-podcast yeLullabot uthotho lungena nzulu kwindlela iisayithi ezenziwa ngayo ngeDrupal kwaye apho abantu abanomdla bagxila kumandla abo kuphuhliso lwemodyuli kunye nokwenza iiwebhusayithi ezothusayo.
Jonga le infographic inkulu kwimbali yeDrupal ukusuka IiNkonzo zeWebhusayithi zeCMS:
tags: angela byronCMSyoma byutaertdrupaliisentimitha ezi-drupalpodcast yepodcastiipodcast zedrumamazwi edrumUguquko lwedrumpImbali ye-drupalI-podcast yelullabotusebenzisa Drupal
Iza nini i-FTC yokuya kwiCash kwi-Endorsement yoSaziwayo?
Kutheni usebenzisa iDrupal?
Ndisandul 'ukufuduka kude noJoomla kwaye ndivumelana ngokupheleleyo nawe John, iDrupal yeyona ilungileyo. Ndifumana njani ukuxoxa nangona ibhlog yam- http://www.iconicdigitalmarketing.com